Sida loo doorto kaniiniga garaafka ah qaabeynta - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Design Graphic, Qalabka Naqshadeynta
Sahaminta xadka naqshadeynta garaafka ee goob kasta oo ka mid ah waxay naga dhigeysaa inaan dooneyno inaan sii dhaafno. Oo mar haddii aan ku qaabeynay xaaladaha ugu yaabka badan, waxaan raadinaa raaxo. Raaxo ayaa lagu yareeyay caqabadaha ugu yar ee suurtogalka ah si loo sawiro. Kiiboodhka iyo jiirku waxay ku xaddidayaan hal-abuurka dhawr guji. Taasi waa sababta aan mararka qaarkood ugu baahanno Tablet Graphics-ka si aan u shaqeyno.
Kiniin garaafyada ah waa shay si ballaaran loo isticmaalo. Waa kordhinta sawirka bilaashka ah. Laakiin had iyo jeer maahan khibrad togan. Mararka qaar waxaan soo iibsanaa wax raqiis ah waana ka niyad jabnay dhir udgoon, dareenka iyo kakanaanta qalinka. Sidoo kale xaqiiqda aag waxoogaa yar oo sawir ah. Laakiin ku dhowaad wax walba waxay ku xirnaan doonaan qiimaha. Aniguna waxaan dhahayaa wax walba, maxaa yeelay qodobkaan waxaan ku raadinaynaa qiimo wanaagsan iyo tayada ugu sareysa si aan uxulno kiniin garaaf ah oo wanaagsan oo aanad amaah ku bixin.
Xaaladdan oo kale looma daaweynayo sida kiisaska kale ee software-ka. The astaamaha ugu muhiimsan ee looxyada garaafka ay tahay inay lahaadaan: Cabbirka, Aagga, Cadaadiska qalinka, ku habboonaanta iyo xallinta kuwa kale. Marka, marka aan go'aansano inaan mid helno, aan ogaano waxa ay yihiin qodobbada lagu xisaabtamayo si loo go'aansado.
1 Cabirka muhiimka ah
2 Kiniiniga Goobta Shaqada Ku shaqeeya
3 Heerka cadaadiska
7 Tilmaamo kale
Cabirka muhiimka ah
Haddii cabirka kiniinka garaafku ka weyn yahay, wuxuu qaban doonaa shaqooyin badan waxaadna yeelan doontaa fursado ka sii weyn. Tani waxay sabab u tahay booska aan ku dhex leenahay. Waa run in marba marka ka sii badan ay weynaanteedu kororto, sidoo kale qiimahiisa ayaa kordha, waana sababta aan u qiimeyn doonno shaqadeenna iyo muhiimadda ay u leedahay go'aan ka gaarista mid ama mid kale.
Fadlan la soco taas haddii shaqadaadu u baahan tahay socdaalHa ahaato diyaarad, tareen ama gaari, kiniin weyn oo muuqaal ah ayaa laga yaabaa inuusan ku habboonayn saxda. Xaaladdan oo kale, kiniin jaantus ah oo loo yaqaan 'Intuos S' ayaa laga yaabaa inuu si fiican ugu habboonaado baahiyaha. Intuos S waa kaniiniga garaafka fudud, midka ugu yars suuqa, taas oo si fudud loo qaadi karo iyo shaqooyinka ugu yar. Tani macnaheedu maaha inaysan lahayn fursado, waxaan horey u ognahay in qalabku uusan ahayn wax walba waxa ugu muhiimsanna waa u heellan iyo dadaal.
Haddii qalabkaaga shaqada loo isticmaalayo xafiis ama guri iyo haddii aad isku daydo inaad fuliso mashaariic waaweyn, kiniin weyn oo garaaf ah oo shaashad isku dhafan ayaa waxtar weyn yeelan doona. Sidan ayaad toos ula shaqeyn doontaa mashruuca adigoon u baahnayn inaad raadiso natiijooyinka shaashadda dibedda ah. Heerka Wacom Cintiq ama Huion GT ayaa ku habboon tan. Qaabka la helayo wuxuu ku xirnaan doonaa awoodda iibsi ee mid kasta.
Haddii aan kugula kacno qiimahaaga, aan aragno sida aad uga bixi karto € 60 una dhaafi karto € 1000. A Wacom Intuos S waa moodel fudud ama ka soo jeeda Huion kala duwan, kiniinka 1060 oo qiyaastii ah € 80 ayaa u qalmi kara ikhtiyaarka koowaad. Xaaladda ubaahan qaab aad u awood badan oo ka weyn, qaabka Wacom Cintiq oo leh qiime aad u sarreeya ayaa laga yaabaa inuu xalka noqdo Moodelkan waxaa badanaa lagu arkaa naqshadeeyayaasha waaweyn, farshaxanada tattoo iyo xafiisyo haybad leh shaqooyin waaweyn.
Kiniiniga Goobta Shaqada Ku shaqeeya
Mararka qaar kiniin jaantus ah oo weyni wuu ku khiyaanayn karaa. Waana in jaleecada hore aan jeclaan karno muuqaalkeeda laakiin markaan kala baxno oo aan hagaajino kumbuyuutarkeena, waxaan ogaanay in wax aysan u qurux badnayn sidii ay umuuqdeen. Ka horna, aan aragno cabirkeeda dhabta ah ee shaqeynaya. Qaarkood badhamada awgood, qaarna laga yaabee, tayada qalabka, waxay xadidayaan cabirka aaggooda. Si loo hubiyo mid iyo tan kale, waxaan marka hore eegi karnaa qeexitaannada.
Aagga shaqada ee la adeegsan karo uma dhigmo cabbirka dhabta ah ee kiniinka garaafyada. Waxaan ku sawiri karnaa oo keliya aagga la tilmaamay. Si loo ogaado aagga aan ku leenahay sawirka waxaan fiirin karnaa xariiqyo qaar (oo isdaba-joog ah ama joogsanaya) oo xiraya aagga.
Yar: 152 x 95 mm
Dhexdhexaad: 216 x 135 mm
Cabbiraadahan ayaa ah kuwa aan is barbar dhigeyno. Iskusoo wada duuboo, waa inaad si dhow u fiirisaa Aagga Firfircoon.
Markay sare u kacdo xasaasiyadda cadaadiska, ayaa sida ugu fiican aad u xakameyn kartaa dhumucda khadadka waxaad wax ku sawireysaa iyadoo ku saleysan sida adag ee aad qalinka ugu riixdo dusha kiniinka. Qodobkani waa muhiim maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa inaad ogaato inta dhibco cadaadis ee kiniin kasta oo muuqaal ah uu leeyahay.
Kiniiniyada ugu badan ee lagu taliyay ayaa caadi ahaan leh heerar cadaadis 2048. Tiradani waxay ku fiicnaan doontaa isticmaalkeeda, in kasta oo moodooyinka qaarkood ay bixiyaan heerar cadaadis oo dheeri ah, kuwani kuma siin doonaan farqi weyn. Maaddaama haddii aad ka hesho moodel leh heerar badan, ha u tilmaamin miisaankaaga iyaga.
Badhamadu waa wax aan ka badnayn a toobiye si loo dardar geliyo shaqadeena. Runtii aad ayey waxtar u leeyihiin laakiin dhammaantood ma leh. Sidii aan horeyba u sheegnay, waxay kuxirantahay shaqada, waad ubaahnaan doontaa iyaga ama waxay noqon doonaan raaxo aad ka maarmi karto. Dhammaan waxay kuxirantahay sida aad u isticmaasho. Laakiin xitaa haddii shaqadeena iyo miisaaniyadeena ay xadidan yihiin, waa inaan marwalba tixgalino oo ay kujiraan badhamada.
Qiyaas shaqadaada, halka ay tahay inaad gooyso qaybo ka mid ah, ku dhaji kuwa kale, mararka qaarkood adigoon lumin aragtida shaashadda. Xaaladdan oo kale, taabashada isku-darka 'Xakamaynta + C' ama noocyada kale ee isku-dhafan ee isku-dhafan, waad tabi doontaa badhamada kuwaas inaad yeelato Muuqaalkan waxaan qabaa waxay muhiim u tahay waqtiga badbaadinta iyo qaladaadka dhici kara.
Sifadaani waa awooda istaroogyada aad ku fulin karto inji. Taasi waa, haddii aad sawiri kartid 10 xariiq halkii inch, xallintu way ka ballaadhnaan doontaa haddii ay jiri lahaayeen 5. Inta badan kiniinnada garaafyada yar yar waxay leeyihiin qaraar dhan 2.540 lpi, halka kiniiniyada garaafyada ugu fiican waxay gaaraan labalaab: 5.080 lpi. Labaduba way kafiican yihiin si ay u gaaraan heerarka faahfaahin xirfadeed.
Qaybtaan waxay ku fiicnaan doontaa in la hubiyo xawaaraha la marayo video-dib u eegis. Tan iyo astaamo iyo lambarro badan oo ay ku siinayaan, haddii aadan arkin, si sax ah uma ogaan doontid inay run tahay. Fiidiyowyadu waxay baran doonaan isticmaalka burushka waqtiga dhabta ah waana arki doonaa sida uu u dhaqmo. Tani wax kale kama ahan awoodda loo diro xogta kumbuyuutarka. Waa kuwee waa isku mid, inta aad ku sawireysid kaniiniga garaafka ah sida ugu dhakhsaha badan shaqada loogu soo bandhigi doono shaashadda. Waxa dabiiciga ah waxay ahaan laheyd inay ahaato mid deg deg ah laakiin mararka qaar sidaas maahan.
Faahfaahinta yar yar ayaa waliba isbeddel sameeya xitaa haddii mararka qaarkood aynaan rabin. The kiniin iyo qalin ergonomics. Markaad bidix tahay, i rumee tani waa muhiim. Astaantan ayaa ka muuqata qeexitaanka kiniinka, iska rog kiniinka.
Sidoo kale ka mid noqoshada galoof laba farood ah si aysan u hor istaagin horumarka shaqada inta aan wax sawireyno. Kaabashadani badanaa waxay ku timaaddaa alaabooyin heer sare ah laakiin annaguba kaligeen waan iibsan karnaa. Xiriirka Bluetooth ama fiilada. Iyo sidoo kale, haddii stylus uu leeyahay baytariyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Sida loo doorto kiniin garaafka ah si loo qaabeeyo
fidel siman dijo
Macluumaad caafimaad oo aad ufiican kaniiniyada.
Inaad awood u leedahay inaad ka shaqeyso naqshadeynta, nooca iyo xarafka
waa maxay taladaadu, mahadsanid
Salaan ka dib, salaan aad u wanaagsan.
Jawaab si fidel siman